Hiditra Mpikambana PDF.to
Zava-dehibe amintsika ny fiainanao manokana. Politique Pdf.to ny hanaja ny fiainanao manokana momba ny fampahalalana rehetra azontsika manangona anao ao amin'ny tranokalanay, https://pdf.to , ary tranonkala hafa izay ananantsika sy andraikitsika.
Mangataka ny mombamomba ny tsirairay fotsiny isika raha tena ilaintsika tokoa ny manome tolotra ho anareo. Isika dia manangona izany amin'ny alalan-tsika ara-drariny sy ara-dalàna, miaraka amin'ny fahalalanareo sy ny fanekenareo. Ampahafantarinay anay koa ny antony hanangonanay azy io sy ny fomba hampiasana azy.
Voaray ihany ny fampahalalam-baovao nangonina nandritra ny fotoana nilaina mba hanomezana anao ny tolotrasa nangatahinao. Ny angona tahirizintsika, hiaro antsika amin'ny fomba azo ekena amin'ny sehatra ara-barotra mba hisorohana ny fahavoazana sy ny halatra, ary koa ny fidirana tsy nahazoan-dalana, ny famoahana, ny kopia, ny fampiasana na ny fanovana.
Isika dia tsy mizara manokana ny fampahalalam-baovao ampahibemaso na amin'ny antoko fahatany, afa-tsy rehefa takian'ny lalàna.
Ny tranokalanay dia mety hifandray amin'ny tranonkala ivelany izay tsy ampiasainay. Azafady mba fantarao fa tsy manana ny fanaraha-maso ny votoatiny sy ny fomba fanao amin'ireny tranonkala ireny isika, ary tsy manaiky ny andraikitra na ny andraikitry ny politikany manokana.
Afaka mandà ny fangatahantsika amin'ny mombamomba anao manokana ianao, miaraka amin'ny fahatakarana fa mety tsy afaka hanome anao ny sasany amin'ireo tolotra tianao ianao.
Ny fampiasanao tsy tapaka ny tranonkalanay dia raisina ho fanekena ny fomba fanao manodidina ny fiainana manokana sy ny mombamomba manokana. Raha manana fanontaniana ianao mikasika ny fomba fitantanana ny angona sy ny mombamomba ny mpampiasa, dia aza misalasala manatona anay.
Ity politika ity dia mahomby amin'ny 6 Jona 2019.
72,983 fanavaozana hatramin'ny 2019!
politika Fiarovana fiainan'olona - Fepetraky ny serivisy - hello@pdf.to
Nataon'i nadermx - © 2020 Pdf.to
Nihoatra ny fetra
Nihoatra ny fetra fiovam-po nataonao roa isan'ora ianao, afaka manova ny rakitrao